Ndingubani? inxalenye 1: Beautiful Kodwa Usenokuyaphula — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Cinga The Bourne Isazisi. Lo mntu uyavuka isikhephe kwaye engazi ukuba ngubani na. Yena ufumana nokwazi aze aye eSwitzerland. Yena ufumana emlweni liyayiqonda uye abaqeqeshelwe ukulwa. Ngaba loo nto crazy ukuba randomly wafumanisa ukuba banobuchule ninja ofihlakeleyo? Kuba eseleyo bhanya nguye uhambo ukufumanisa ukuba ngubani na. Nguye okwaziyo izinto akazange nokuwazi. Kodwa xa engayazi loo nto, akayi kuba nako ukuphila njengoko ngokwenene.
Mna musa ukucinga nabani kule ndlu izakhono ninja ofihlakeleyo, kodwa kubalulekile ukuba sicinge ngokuzazisa yethu.
Njani siwubona ubunguwe lethu kakhulu yakwenza siphumeza njani ubomi bethu. Ndinyanisa, Ngaba uyazi ukuba ngoobani ngumntu? Ithetha ntoni le nto? Ngaba uyasazi isizathu sokuba ulapha, yintoni intsingiselo yakho, oko ukuko esikwaziyo, into kodwa ubumele ukuba uyayenza? Yini na ukuba bezikade? Ungubani? Ukuba ngaba uphendule le mibuzo thina ingakuchithela ubomi bethu, eziphilayo njengoko umntu.
Kulihlazo xa iimbaleki pro ndenzakale okanye kufuneka umhlala, kwaye ngoko ke lento ezilahlekileyo ngenxa ubomi babo. Kuba babecinga lonke eli xesha identity yabo ukuba imbaleki. Nantso indlela abanye babaphatha, kwaye ke oko bamkela. Ngoko ke ukuba leyo yindlela abo, nantso into baza kugalela ubomi babo. Ke ngoku loo nto behambile ke bengenanto baphile.
Kwaye kukho oosisi abatsha baye kulwalamano kulwalamano, ngubani phithi kunye ukubonakala kwazo. Kuba becinga ukuba bangoobani ushwankathelwa yokuba intombazana entle ukuba guys ezifana. Kwaye xa ukuba uku buyaphela, akuhambi batyumke. Nantso apho bafumana injongo yabo. Ukuba bedidekile ngawe ukuba ngubani na, uya sisenokungalwazi oko kufuneka esenza bakho-yaye oko kunokuba nemiphumo ebuhlungu.
Ungamcebisa uthini xa ndicela ukuba ungubani na? Umfundi okanye imbaleki rapper okanye umfundisi? Hayi, ezo izinto ntoni. Ungubani?
Asinako ukuvumela ihlabathi esichazayo. Asinako abahlobo bethu esichazayo. Asinako ukuba abazali bethu esichazayo. Kufuneka ukuvumela uThixo esichazayo kuba nguYe igunya ngalo mba. Ukuba awuyazi ukuba singoobani, asinako ukuphila ubomi ngendlela abhalelwa ukuze baphile.
Mna ndithethe malunga izinto nezigidi iSibhalo uthi ngathi, kodwa kwakufuneka alabe libe ezintathu. Lowo siza kuthetha ngayo kweli kwiseshoni yokuqala yeyokuba emihle wenza, kodwa uyaphule. Nantso ingongoma ephambili kwale seshoni: sonke emihle wenza, kodwa uyaphule.
Kwaye ndifuna ukujonga kwiNdumiso 139 Ekuqaleni. Jika khona ukuba iiBhayibhile zakho. Nangona uvula ndiza kukunika imvelaphi emfutshane.
yonke le INdumiso ngendlela uThixo wazi yonke into, kwaye yonke ngexesha elinye. Uyazi xa uDavide wahlala phantsi waza ekuphakameni kwakhe. Uyazi ukuba uzakuhamba uthi ngaphambi kokuba uthi. Kwaye kuyo yonke ngexesha elinye. Yena ezulwini, Nguye emhlabeni, Yena yonk. Wathi uDavide udumisa uThixo ngenxa yokuba.
Kokuvula kwivesi 14 imncoma uThixo njengoMdali. Kwaye isinika ufifi kungena singobani.
Ndiyabulela kuwe ngenxa enokuba ndenziwe ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo; ngemisebenzi yakho emangalisayo, Ndiyazi ukuba kakuhle ngokupheleleyo. Ayengagushekile kuwe amathambo am ifihlakeleyo kuwe, Mna ndenzelwayo kwindawo efihlakeleyo. Xa Ndalukwa ndayimfakamfele ezinzulwini zomhlaba, Amehlo akho andibona ndiseyimbumba. Yonke imihla Ziyiliwe ngenxa Zazibhalwe encwadini yakho phambi kokuba omnye wabo waba. (iNdumiso 139:14-16, yesiXhosa yowe)
UThixo usenze. Nantso loqalo bethu, yaye simele sihlale ekukhanyeni loo nyaniso.
Ngoku ndiza gwa abantu abaninzi apha ngokuhlwanje ukuqonda ukuba uThixo uMdali wethu. Akukho namnye kuthi kudale ngokwethu. Ngokwahlukileyo koko abaninzi bathi, sibe na apha ndenzile okanye ithuba. Yiloo lee-iposi yaye kungakholeleki. Sadalwa ngabom nguThixo. Kwaye ukuba akukho nto engabalulekanga. Oku kwenza umahluko ebomini bethu kwaye lilungise nobuntu bethu.
Kodwa ndifuna ukuba ucinge okomzuzwana ukuba uThixo akazange adale kuthi. Ulapha gaxa oluzenzekelayo. Akukho njongo ngabom yobukho bakho. Ngoku zama ukuphendula loo mbuzo, yintoni na apha? kubomi bethu ukuphulukana yonke intsingiselo kunye nexabiso xa abe ingozi oluzenzekelayo. Oko kuthetha usapho ngokwenene akuthethi nto, ukuziphatha zethu nganto, amaxesha am nzima kuba injongo. Yindlela entle imbi ukujonga ihlabathi. kwaye ngethamsanqa, oko akuyonyani. UMdali wethu uye wazibonakalisa kuthi ngelizwi lakhe.
Apho uvela okuninzi malunga nina uthi. Ngoko ke, ukuba ndithe ndafumana isixhobo engaqhelekanga kwaye andikwazi bana phandle yakwenza nayo, ngubani oyena mntu ukubuza? Umntu owenza loo nto. Banako undixelele into obuyiyo nento kaThixo. Sifuna ukuva uMdali wethu, wasidalayo.
kwindinyana 14, UDavide uthi "ndenziwe ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo." Ucinga ukuba kuthetha ukuthini?
Kutheth 'ukuthini ukuba ngokoyikekayo zenziwe? Oku kuthetha ukuba uThixo akazange nje siphose ndawonye. Nto ibalulekileyo kuye. Wasenza kunye nembeko enkulu uloyiko. Akuzange engalawulekiyo okanye oluzenzekelayo. Amehlo akho blue zezi ngenjongo, okanye isikhumba sakho brown, okanye imilenze yakho elide. Sonke ngenjongo.
Ndikhumbula ukuba eklasini yobugcisa esikolweni phakathi, kwaye yonke into eyenziwe ndinolunya, kodwa kungekhona ngenjongo. Kukho esi sitya umama wam nangoku ekhabhathini endlwini yethu. Yeyona nto ugliest uya kuze ubone. Yinto ukuba ndibe akakwazi ukwenza ngcono. Kungenxa andizange nomdla owaneleyo ukuba nyhani ukunika ixesha kuyo. Ndandifuna nje ukuba Khawulezisa entanjeni, ukuze ndikwazi ukuthetha nabahlobo bam. UThixo akazange randomly siphose ndawonye. Wakwenza oko ngononophelo olukhulu. Yena eyakhiwe kakuhle wena. Cinga wayekrola abanezakhono, ezikrolela ngenyameko kude de wobugcisa yakhe entle.
Kwaye uthi UDavide yena 'yenziwe ngokumangalisayo. "Oku kuthetha ukuba wenza umsebenzi omkhulu. Thina izidalwa ezimangalisayo. kwabantu, yinto eningenakukholwa.
Ehlabela mgama esithi, “ngemisebenzi yakho emangalisayo, Ndiyazi úyazi kakuhle.” Imncoma uThixo imisebenzi yakhe ebalulekileyo. UThixo uMdali emangalisayo. Uye wenza izinto ezimangalisayo. Kwaye phakathi kwabo imisebenzi emangalisayo kaThixo. Inyaniso, sibe yeyona imangalisayo bonke bephela.
Kazi ukuba bendikhe enika uThixo uzuko emfaneleyo ngemisebenzi yakhe emangalisayo? kwabantu, yinto eningenakukholwa. Oogqirha basazama ukuqonda inkqubo entsonkothileyo ukuba umzimba womntu. Kwiminyaka embalwa edlulileyo ndibene iinyembezi emiphungeni yam ndingakwazi nokuphefumla. Ndandilele ebhedini esibhedlele, yaye oogqirha abazange ukuba enze into kuba umzimba wam waye sele awugcine. Kwiintsuku ezimbalwa kamva, kwakukuhle. Thina ezimangalisayo. Si ya, kodwa emangalisayo.
Kanjalo, abantu ukhankanye izinto izilwanyana onokuzenza ukuba ngeke, ngathi izilwanyana enokuqhutywa ngokukhawuleza okanye ngamandla. Sazi njani ukuba sibe nxalenye imangalisayo indalo?
Siza sidalwe ngokomfanekiso wakhe! akukho silwanyana, okanye isityalo, okanye isiqwenga somhlaba, okanye iplanethi wadalelwa ngokomfanekiselo kaThixo. Wasenza ukuba sifane naYe! UThixo wadala yonke ukubonisa uzuko lwakhe, kwaye sibe inxalenye yendalo ukuba ufumana ukubonisa oko kakhulu ngokucacileyo, ngokuba nguwe inxalenye nto ezifana naye.
Ngoku ucinge ukuba. Nantso injongo yakho ephambili ebomini: ukubonisa uThixo. Ndafunda enye ngumbhali kuthelekiswa ukuba eqingqiweyo. Thina ufana eqingqiweyo kaThixo kwindalo. Sifuna uThixo, kodwa ufana naye. Thina bangabameli kwaye sifumana ukubonisa umfanekiso elithotyiweyo kuye. Ndiyayithanda loo mfanekiso.
Ke ngoku? inkcubeko yethu rhoqo ukufundisa ukuba ukunganeliseki. Ufuna oku. Awukho mhle ngokwaneleyo, Buff ngokwaneleyo, ezinqinileyo ngokwaneleyo, eyinzwana ngokwaneleyo, smart ngokwaneleyo, okanye kwezemidlalo ngokwaneleyo. Kulungile awunguye egqibeleleyo, kodwa nina ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo.
Ndifuna ukuba ufumane ulwaneliseko kuloo. Guys okanye amantombazana ukuze Ucinga ukuba nomtsalane, kodwa uyazi ukuba yintoni esiyenzayo ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo nawe. akuyi kuba bakrelekrele ukuze, kodwa nina ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo. iziqhulo yakho inokuba corny, kodwa nina ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo. Wena emangalisayo, emangalisayo, indalo emangalisayo kaThixo uSomandla. Kwaye nto enokuthatha ukuba kude!
Abanye bethu bacinga encinane kakhulu kwethu. Sicinga siza nto. Nantso ubuxoki. Wena ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo. Musa ukuvumela nabani na kuwe ngenye indlela. Oko UThixo ucinga mandundu ngakumbi kakhulu ngaphezu koko wena okanye abanye basenokucinga.
Abanye bethu bacinga kakhulu ngeziqu. Cinga Kanye West. Lingena kwiinkathazo, kodwa into athi izinto wonke umntu sele ucinga. Uye ingoma ebizwa "Ndzi uThixo." Ngoko ke abantu abaninzi bacinga ukuba oku ngenyameko ngokwabo. Kodwa wena nje usisidalwa. UThixo yedwa ngumdali.
Oku kuneziphumo kwindlela sibona abanye. Akukho bani yanto. Akukho bani azibalulekanga. Umntu ngamnye ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo. Xa kudlula loo mfo bhadu esitratweni, khumbula ukuba akukho Wayengengomntu. Akukho nto efana Wayengengomntu.
Ngaba nabani apha babysit? Ndiya kuba nonyana oselula, xa mna nomfazi wam kwaye ufuna ukuya ngomhla kufuneka ukucwangcisa ngathi kwiminyaka emithathu kwangaphambili ukuze sikwazi ukufumana kubagcina. Kodwa ukuhlawula abantu ukuba bakhathalele unyana wethu ngeli thuba bemkile. Iimpelesi ukugcina amehlo zabo izinto bokuncedisa. Kakuhle yonke indalo kwindlela uThixo abakhathalele. Kwaye Yena ogcina amehlo akhe zonke kuyo, kuquka nawe.
UThixo akazange adale yonke into uze kukuyeka. UThixo uyazazi kakuhle yonke into ntoni.
“Ayengagushekile kuwe amathambo am ifihlakeleyo kuwe, Mna ndenzelwayo kwindawo efihlakeleyo. Xa Ndalukwa ndayimfakamfele ezinzulwini zomhlaba, Amehlo akho andibona ndiseyimbumba.” (iNdumiso 139:15-16)
Uye uthi ukuba xa esibelekweni uThixo akumbona. Kunjalo ngoxa ngaloo esibelekweni Akukho mntu wumbi unako ukumbona. Abazi ukuba lukhulu malunga naye. Kodwa uThixo ubona, nokuba xa nje ubukhulu yamantongomane. UThixo wayemkhathalele, emxhasa, unitha kuye ndawonye.
Xa mna nomfazi wam wafumanisa ukuba ukhulelwe, saya ugqirha ngoMvulo olandelayo. Kwaye singakwazi sele uve uVuyo. Yena yayincinane, kodwa uThixo wayemthanda waza ngokumenza. UThixo wabona umzimba wakhe omncinane ndiseyimbumba. Akukho nto iyasinda nembono kaThixo.
Ukuba uThixo walibala ngawe, ngenindazile. Ngulomisa iintliziyo zethu zibetha nemiphunga yokuphefumla.
Akukho namnye kuthi ezingabonakaliyo. UThixo ubona yaye unomdla kakhulu ebomini bethu. Oku kufuneka sisonwabiso kuthi. Akukho nto ukuba bakwazi ukuba uThixo azisilindelanga. Akukho ucelomngeni okanye ukwenzakalisa. UThixo uxhalela izinto ezibakhathazayo wena. Awunayo ukulwela ukubaluleka-baza sele ebalulekileyo.
Kuthekani ukuba mvumi oyithandayo kuthiwa igama lakho phandle kumabonakude, andithandi ukuba kumangalisa? Nokuba zange kulingisa ngesandla sabo, bekuya kuba ngokwaneleyo ukuba babesazi nje nina. Kobeka phi emangalisayo kakhulu ukuba uThixo uyazi ukuba singoobani. Ukuba loo nto ngokwaneleyo?
“Yonke imihla Ziyiliwe ngenxa Zazibhalwe encwadini yakho phambi kokuba omnye wabo okwabaya.” (iNdumiso 139:16)
Utata wam wayedla ngokutsho zonke iintlobo zezinto kum ukuba wawagxotha ndiphambane. Kuba into enye, ukuba uzakujika zonke ingxelo ndiya kungena abanye uhlobo isoyikiso. Kodwa enye into wayedla kuthi, “inkwenkwe, Ndiyazi ukuba ngcono kunokuba uzazi wena ngokwakho.” Bekuya kundenza uyageza kangaka. Kodwa ngenye imini ndaqonda ukuba iyinene. Ngoba? Ngenxa kid ingqondo yam encinane wayengasiqondi izinto. Kodwa utata wam wayesazi.
UThixo uyazazi izinto ngathi ukuba asazi kuba awukho kuye. ubuchopho bethu encinane yabantu ingavakaliyo yonke.
Uthi uThixo wayesazi yonke Wayeza kuyenza ngaphambi kokuba kuzalwe yena. UThixo ulawula yonke into yaye wazi yonke. Yena waziyo ukuba zingaphi Kwaneenwele ezi zentloko yenu. Uyazi ukuba ucinga ntoni ngoku. Uyayazi into masilale ngokuhlwanje ngomso. NguThixo kuphela nazi okuninzi malunga bonke abantu billion ezisixhenxe emhlabeni.
Le nto kufuneka sikhangele eBhayibhileni ukuba usixelele ukuba singoobani. Ngokuba uThixo Lowo wasidalayo yaye unako usixelele. Wazi ngcono kunokuba siyenze
Oku uyancomeka! Yena Akufani kuthi. UThixo akazange afumane nto ngaphandle. Azange kuphosakele. Azange wothuka. Azange kwafuneka ukuba bajonge nantoni. Azange wenza isigqibo phambi kokuba zonke izibakala. Yena uyakwazi konke!
Ngaba oku kukwenza ufuna uthembe kuye?
Kufuneke i. Kodwa ke njengoko sele kuchaziwe, abanye bethu bacinga ngokugqithiseleyo. Kwaye oko becala ngenxa siyazilibala le isahlulo sesithathu. Silibale ukuba siza nazo baphuke.
Siza kuphela ngokubalulekileyo; siza ngohlalu. IBhayibhile ithi xa uThixo wasidala ngokomfanekiselo wakhe. Siye nasiphako yaye ngokugqibeleleyo enxulumene noThixo. Kodwa xa isono sangena ehlabathini, oko kwabuchaphazela sonke. Yaye ngoxa sasidla ukuba lonke, Ngoku baphuke. ukuwa wethu kufana Wawisa omhle akhazimlayo ukukrola. Yinto wazinqunqa. Ngoku kukho isifo, ukufa, libi yonke yesono.
Ndisandul le iPhone kungekudala kakhulu elidlulileyo. Isebenza kakuhle. Kodwa phambi kokuba ndingene le intsha iPhone wam ndaphants. Ndingayi ngalo lonke ixesha, ngoko kwikhusi ke esisikekileyo. Oku ngokwenene olucothayo. Loo nto lungqubene kum. Ndandingafuni ukuba achithe imali umntu omtsha kodwa ke. Wonke ngoku ndize ke mna ndizibhaqe ukukhalaza ngendlela eyoyikekayo ifowuni yam. Kodwa ke mna Ndingathanda khumbula yindlela cell phones ezisetyenziselwa ukuba. Leselfowu- yokuqala Ndinaso wayengomnye abo bokuqala kunye screens umbala. Ndandicinga ndamangaliswa.
Kodwa ubeko wam iPhone yaba amaxesha aliwaka ngcono kunokuba ifowuni kuqala ndafumana. Bendiya bayayiqonda inokuba ubeko, kodwa kusekhona emangalisayo. Kusenokuba kade umbilini, kodwa usenokubona tshuphe amazingness yayo. Ndisakwazi ukuthatha imifanekiso kakuhle kuyo. Ndiya uyakwazi ukufumana kwi-Internet kunye nayo. Ndisakwazi umxokozelo iimpahla kuyo. Ndiya kuba apps nemidlalo kuyo. Apple wenza umsebenzi emangalisayo ngaloo ifowuni. Ukuba ifowuni Kwakumnandi, kodwa uyaphule.
Ngendlela efanayo, UThixo wenza umsebenzi emangalisayo kuthi, kodwa baphuke. Ukuba ujonga kuthi, uyakwazi uwaxelele siza izidalwa ezimangalisayo, kodwa ke kucacile ukuba siya baphuke. Asazi kuhlala ngonaphakade. Thina agule aze afe. Sisiba buhlungu namaqatha zethu. Asazi khumbula ngokwempahla iimvavanyo. Thina buhlungu ngabanye. Kwaye siyona kuThixo.
Ngaba ukhe ucinge ukuba inyani ukuba baphuke lento? Uninzi siye ubomi bethu abazidlayo siza kakuhle nje. Siqhubeka ukuqhathwa kuba akukho ngathi naluphi ezahlukeneyo ngaphezu kwakhe nabani na ongomnye abasingqongileyo. Kodwa inyaniso kukuba, sonke uyaphulele. Ndifuna ukujonga iindlela ezibini zaseprayimari ukuba baphuke.
Ekuqaleni, siza kwaphulwa ngokwasemzimbeni. Xa uselula siphila phantsi bacinge ukuba esiyenzayo entle nje. Kwaye nako ukucinga ukuba ngenxa yokuba akukho sibone naziphi na iimpawu ukwaphuka yethu kanti. imiqondiso mhlawumbi ezincinane, thina kodwa ungazihoyanga. Loo nto ifana xa umfazi wam uqhuba Ford wethu Explorer. Yaqalisa ukwenza ingxolo, kodwa nje baqhubeka qhuba. Kwiiveki ezimbalwa kamva siqhuba umva Chesapeake Bay kunye ivili phantse awaluphelisa. Endaweni yokutyeshela imiqondiso, siya kufuneka ulumkele kubo.
Omnye umntu eBhayibhileni owenza uyiqonda kakuhle kwihlabathi lethu bewile ukuba uYobhi. Yonke wathathwa kuye. Phakathi isijwili malunga nemeko yakhe ibonakalisa kurhulumente lonke uluntu. Nantsi into ayithethayo:
“Umntu, into ezelwe ngumfazi, ezimbalwa iintsuku, izele ziinkathazo. Uphuma endlwini njengentyantyambo, abune; ke ubaleka emke njengesithunzi yaye iqhubeka hayi.” (umsebenzi 14:1-2)
UYobhi uthi imihla yethu akukho mda. Asinayo inani engenasiphelo leminyaka ukuba baphile. Siya kufa ngenye imini. se no kuphuma entle njengentyantyambo, kodwa siya kubuna. Xa uthetha ngathi ngetshaneli, yena uthetha imizimba yethu iya ngokuthe uvale phantsi phezu kwethu. ubuhle yethu iya kuphelelwa kwaye kugxagxiseka. Ke akuyi kusoloko kusebenza kakuhle njengokuba besenza ngoku. Kwaye ekugqibeleni siya kufa. Kwaye xa uthelekisa ukuba njengesithunzi, uye yokunxibelelana ukuba obu bomi a esisigxina. Kufika esiphelweni.
Ndifunda inqaku lemagazini Ixesha namhlanje unelungelo: "Ngaba Google Sombulula Ukufa?"Eli nqaku wathetha malunga inkampani ezilibhongo kwaye ithanda njani ukuba kutolwe ukuze inyanga. Akukho mali inzululwazi neteknoloji ukuze ukusombulula ingxaki yokufa. Iyenzeka. Ukufa bobokwenene Google awakwazi kusombulula.
Ngoko ewe, senziwe ngokumangalisayo. Sicela le nxalenye imangalisayo yendalo, kodwa ukususela kwesiwo thina nayo baphuke.
ukwaphuka yethu lisikhumbuza uThixo ukuba siza. Asimele sicinge ukuba imizimba ulutsha lwethu ukuba zisebenza kakuhle ukuze ngoku into siyakuba ngonaphakade. Esi sisizathu esilungileyo sokuba kuthi ukuba alinde de kamva ukuba bakhonze uThixo.
Ngoko ke indlela sokuqala siza kwaphulwa akaphilanga ngokwasemzimbeni. Kodwa kwakhona baphuke ngokomoya.
"Akukho namnye ulilungisa, hayi, akukho namnye; akukho namnye umvayo; akukho namnye ofuna uThixo. Bonke iseyiphambukele; bebonke baye ababi nto yanto; Akukho wenza okulungileyo, Akukho nokuba abe mnye. Umqala wabo ulingcwaba elivulekileyo; basebenzisa ulwimi lwabo ukuba akhohlise. Ubuhlungu bamaphimpi buphantsi kwemilebe wabo. umlomo wabo uzele kukushwabula nobukrakra. Iinyawo zabo zinamendu ukuya kuphalaza igazi; emendweni zabo ekonakaleni neentsizi, kwaye indlela yoxolo abayazanga. Akukho koyika Thixo phambi kwamehlo abo. " (KwabaseRoma 3:11-18)
Esi sicatshulwa kwincwadi yabaseRoma apho uPawulos iqala ukuthetha malunga bonke bonile ukuba uThixo. kwaye apha, nantsi sukuba ekuxelela amaYuda, ewe wena. Yethu sonke.
“Ngokuba akukho mntu ulilungisa ehlabathini, wenza okulungileyo, angoni.” (INtshumayeli 7:20)
Ngoku isizathu sidla Ndicinga ukuba abantu abalungileyo lolusezantsi esizilinganisayo kuyo: nganye komnye. Ngoko kunjalo kuthelekiswa nabanye abantu mna ngumntu olungileyo. Mna musa ukubulala abantu. Kaloku mna wogrogriso. ngoko ke, Mna umntu olungileyo, kunene? Ungahambi iBhayibhile. Ngokwembono yabantu, Qiniseka ukuba unako ngumntu olungileyo. Kodwa yintoni ofanele nomdla ukuba nembono kaThixo.
Kwaye siya kusetyenziswa, sinako ngokwenene Asinakuxambulisana naye. Yinto zonke oyinyaniso.
Kwaye qaphela ukuba umele ukwenza ityala ukuba lonke ilungu kuthi ubeko-ukuqonda, umqala, ngeelwimi, imilebe, umlomo, iinyawo, amehlo-sonke! Sifuna abantu abalungileyo abenza izinto ezimbi maxa wambi. Sicela abantu abanesono ngubani isono rhoqo. Siya kuba iintliziyo abagulayo.
Siza kusoloko sithi ukuqonda le nyaniso, kodwa akukho ibonisa anyuka ngendlela siphila ubomi bethu. Sithi siyazi siza kwaphulwa, kodwa siza andivumanga ukuyivuma thina Unyanisile kwimeko. Xa umntu siyasigweba, impendulo yethu yokuqala, endaweni sokuzigocagoca, usoloko yokuba sizithethelele. Mhlawumbi ngaba sithi nje, okanye mhlawumbi andibasoli endaweni. Ukuba siyakuqonda siza kwaphulwa, ke mhlawumbi simele sijonge nje thina kuqala. Wena tenxileyo, leyo ethetha ukuba kuba yinto ephosakeleyo.
Okanye ngale-sijonga indlela phantsi abanye abantu esonweni sabo. Njengoko ukuba ngamnye kuthi bungaqotywa kwaye nabadinga kuMsindisi efanayo. Akukho mntu unokuthi iba ngcono kunawe, kwaye awukwazi ukuthetha nawe ulungile kunabo. Ukuze benze izono ngakumbi kunawe, kodwa thina sonke singaboni abafuna uMsindisi egqibeleleyo. Kude kuqatsele, sisxhomekeke ngokwethu ukuba ezulwini.
Sinento imeko intliziyo nentliziyo kulapho yonke into iphuma. Ngoko ke phantse ngathi umphanda wamanzi elidityaniswayo anetyhefu. Wonke iglasi ugalela oko uya anetyhefu. Ngoko ke masithi ukuba iglasi ezahlukeneyo iingcinga zakho, nezenzo, iminqweno, kunye nezigqibo. Sonke singcolile.
Siza kangaka kusetyenziswa isono ukuba ngaba ucinga ukuba usebenziswano enkulu, kodwa ke. Isono le nto ndiphila lukaThixo. Isono ke le into oya kugcina ebomini obungunaphakade kuthi. Xa sicinga abantu eyoyikisayo okanye kwiimeko mibi utshaba lwethu lukhulu. tshaba lwethu lokwenene ntlungu ongenza ngayo umonakalo eyona isono yethu. Nezinye izinto kusenzakalisa nje ixesha, kodwa ngenxa yezono zethu, ukuze babethwe ngonaphakade. Yinto isono esenza utshaba lukaThixo.
Abanye bethu ucinga ukuba akazange enze umthetho. Kodwa ulwaphulo imbi kulo lonke liphela, ukuba ndone kuThixo. Nguye eziphezulu kakhulu igunya ipolisa, okanye umongameli. Yena uThixo! Yaye ukuba nambulala thina, yokuba siye baxoka Kusekho nto bubugqwirha uThixo.
Sicela njengesipili eyaphukileyo. Sibonakalisa ngokomfanekiso kaThixo, kodwa ungathanda simele. Yiloo nto zenziwa senze ntoni. Endaweni sibonisa umfanekiso egqwethekileyo ugly. Uthando ajike yinkanuko. Umnqweno ukubonelela ajike ukunyoluka. Ukuzibophelela ifana zithixo. Yinto sonke isono, uThixo uyayicaphukela.
Nantso iindaba ezimbi. Yintoni iindaba ezilungileyo?
Sicinga ngabantu abalungileyo kuphela baye eZulwini, kwaye yinyani ngengqiqo. Kodwa akukho namnye kuthi ulungile. Ngoko ke kufuneka omnye umntu ukuba asinike ukulunga kwabo. Loo mntu nguYesu.
Oku kuthetha ukuba ngeke sibeke ithemba lethu kwanemiphefumlo yethu ngokwasemzimbeni okanye ngokomoya. Bona sele eyaphukileyo uya usihlise. Sicela akwanelanga kulungile. Kufuneka uYesu Thina ndibulawe babuyelane.
Ukuba badlabhuka nje ngokomoya okanye ezaphukileyo nje emzimbeni, mhlawumbi kuya kubonakala ngathi ukuba elikhulu usebenziswano. nje emzimbeni, oko kulungile kuba xa sisifa siza okulungileyo. Okanye ngokomoya, siyakuba soze kufuneka ujongane noThixo kuba siza soze afe. Kodwa nokuba indlela siza kuma phambi koThixo ingcwele yithandi nesono sethu.
Uyazi wena abasweleyo? Kaloku iindaba ezimnandi kukuba unako kusindiswa. Kukho uMsindisi ohlangabezana imfuneko inkulu.
"Usindiso lufumaneka akukho mntu wumbi, kuba akukho gama limbi phantsi kwezulu, linikiweyo eluntwini, esimele ukusindiswa ngalo. " (iZenzo 4:12)
UYesu nguye yedwa abuyisele oko kwaphulwa. Nguye kuphela okwaziyo bamanyane ngayo uThixo. Nguye Ithemba lethu kuphela. Ngokuba wafa ngenxa yemvukelo yethu. Wabuya wavuka emangcwabeni. Siye batyiwe i oyilwayo. UYesu walihlawula lonke.
Ngoko ke ukuba sikhe: Ungubani?
UThixo usikhathalele kuba wasenza. Ujonga phantsi kwaye uyayiqonda ukuba njengoko isithsaba indalo yakhe. Kodwa ebona ukuba yoyikekayo ophukileyo. Sicela abafuna uMsindisi.
Kufuneka sukucinga nawe ngumKristu apha namhlanje kuba nawe uye ecaweni. Ukuba ngokwenene wavuma ukuba baphuke, ukuba kokuba wone uThixo, ukuba niziswele uMsindisi. Ukuba akuyi ngokuniguqula esonweni. Ukuba akuyi Kukuthembela kuKristu, ke wena asingomntwana kaThixo.
Kwiseshoni elandelayo, siza kuthetha ngendlela uThixo ubenza ukuba kwintsapho yakhe. Makhe sithandaze.
1. Indlela yokuba uThixo wamenza ukuba ukutshintsha ubomi bethu? Yintoni umahluko kuya kwenza le veki?
2. njani ukutshintsha njani ubomi bakho esazi ukuba uThixo ubona yonke? Yintoni umahluko oko kuya kwenza ukuba uThixo uyazi ngomntu?
3. ngaba ucinga ukuba uyazi ukuba uza kufa ngenye imini njani?
4. ntoni ukwaphuka lethu lokomoya ukubonisa njani ebomini bethu?
5. Ngaba isibakala sokuba akukho namnye kuthi ulungile kuthetha sikwamkela oko nje kwaye baphile ngaloo ndlela?
6. Kuthetha ukuthini ngokwenene ukuba aguquke esonweni, ukholwe kuYesu?
michael kukulunywa • EyoKwindla 4, 2014 ngexesha 9:46 pm • impendulo
Yintoni obu eyoyikekayo wengqiqo nokufundisa. Ndisikelelwe nguwo
Allan • EyoKwindla 5, 2014 ngexesha 3:36 pm • impendulo
Oku kakhulu uThixo good.May anisikelele.
Glore • EyoKwindla 6, 2014 ngexesha 11:23 mna • impendulo
Love Bro. Ndakhe eyaziwa ngokuba umculo wakho unesiphiwo loo ntsimi kakhulu. enkulu mayelo. Ayikwazi alinde kude kufike.
uSolomon ukumkani • EyoKwindla 12, 2014 ngexesha 6:27 pm • impendulo
Ndiziva ndisikelelekile, Ndisikelelwe!
Ayikwazi ukulinda nxalenye e qu.
inkosi ikusikelele, uhambo.
MichaelSmith • EyoKwindla 14, 2014 ngexesha 12:34 pm • impendulo
uhambo, enkosi hlobo umculo eqinileyo ukuphulaphula, kwaye umbulelo kwezi mfundiso. Baye kakhulu ukuphulaphula ekufundiseni nenkuthazo, Ndiyathandaza ukuba uThixo uqhubeka ukuba anisikelele, ukuba ngenye imini ndifumana ukuba imfundiso buqu.
Payne • EyoKwindla 19, 2014 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Oku kakuhle! Nini oluzayo 2 iividiyo kukhululwa?
Juan • EyoKwindla 19, 2014 ngexesha 10:49 pm • impendulo
uhambo umyalezo Great uthando lee ngendlela Yifake yonke ndawonye yonke ochukumisa bukhulu ukwazi ukuba ndiza emihle wenza Ngamana uThixo anisikelele wena kunye nosapho
ariel • EyoKwindla 25, 2014 ngexesha 7:39 pm • impendulo
Le ntshumayelo elikhulu enjalo. Ndinceda ndaqonda ukuba indlela yam yokucinga ngokwam ngokwenene engalunganga. UThixo ngenene usebenzisa kuwe!
lamaKristu • UTshazimpuzi 23, 2014 ngexesha 1:16 mna • impendulo
Leo • EtiMnga 11, 2015 ngexesha 10:43 pm • impendulo
entle kakhulu, mayelo nabantu abatsha kufuneka!